यस्तो मन छुने तस्वीर: घरमा एक टुक्रा कपडा न’भेटिएपछि ७७ वर्षीय बृद्धलाई परालमा सु’ताएर स्ला’इन दिदैँ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यस्तो मन छुने तस्वीर: घरमा एक टुक्रा कपडा न’भेटिएपछि ७७ वर्षीय बृद्धलाई परालमा सु’ताएर स्ला’इन दिदैँ!
admin December 28, 2020 December 28, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
भोजपुर । भोजपुरको ष’डानन्द नगरपालिका ३ खा’र्तम्छा चि’चिला निवासी ७७ वर्षीय रामबहादुर राईको परालको ओ’छ्यानमा राखेर स्ला’इन पानी दिइएको तस्विर भाइरल भयो । कतिले उक्त तस्विरलाई ब’नावटी पनि भने । तर यो सत्य हो ।खा’र्तम्छा निवासी ७७ बर्षिय राईलाई परालमा सु’ताएर स्ला’इन पानी दिइएको झु’टो हैन साँचो हो । उनी दशैं अगाडिदेखि बि’रामी थिए । उनको घरमा उपचारका लागि ओ’छ्याउने एउटा तन्ना पनि छैन ।
मंसिरको जाडोमा उनी सुत्ने ठाँउमा पराल बाहेक केही थिएन । उनी सामान्य खालको खा’स्टोको भरमा रात क’टाउन वि’वस छन् । परालमै राखेर स्लाइन पानी दिएर उपचार गरेका राईको श्रीमतीको मृ’त्यु केही बर्ष पहि’लेनै भइसकेको छ । अहिले उनको एक मात्र छोरा छन् सु’स्त म’नस्थिति अवस्थाका । ७७ बर्षिय राई बस्ने सामान्य क’टेरो मात्रै छ ।
उनी क’र्तब्य ज्यान मु’द्दामा १७ बर्ष का’रा’गा’र बसेर नि’स्किएका हुन् ।जी’र्ण घरमा बस्दै ७७ बर्षिय राईलाई ष’डानन्द नगरपालिकाले नयाँ बनाइ दिने भएको छ । यो तस्विर बा’हिरिएपछि नगरले चा’सो दिएको छ । उनलाई नगरले चाडै निशुल्क घरको पनि ब्य’वस्था गरेर नयाँ घरमा सार्ने ष’डानन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मे’रिका राईले जानकारी दिएकी छन् ।
नगरपालिकाले ७७ बर्षिय बृद्धलाई नयाँ घरमा रा’ख्न खा’र्तम्छाकै स्थानियलाई घर बनाउने जिम्मा दिएको उपमेयर राईले जानकारी बताइन् ।सामाजिक सञ्जालमा ७७ वर्षीय बृद्ध राईको परालमा राखेर स्ला’इन पानी दिइरहेको फोटो देखेपछि अवस्था बुझ्’न ष’डानन्द नगरपालिकाका मेयर बी’रबल राई र उपमेयर मेरिका राई बुधबार खा’र्तम्छा पुगेका थिए ।
स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन बुधबार साँझ खा’र्तम्छाको चि’चिला पुगेको ष’डानन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मे’रिका राईले जानकारी दिएकी छन् ।‘सामाजिक सञ्जालमा पराल माथि राखेर स्लाइन पानी दिइरहेको फोटो ब’नावटी नभइ बास्तविक फोटो हो ।’
उपमेयर राईले भनिन् ।जाडो मौसममा ७७ वर्षीय बृ’द्ध त्यसमा पनि वि’रामी भएको अवस्थामा परालमा सु’तेको देखेपछि मेयर र स्वास्थ्यकर्मीको टो’ली खा’र्तम्छा पुगेको उपमेयर राईले जानकारी दिइन् ।
नगरपालिकाले उनलाई खाद्यान्य, लत्ताकपडा सहयोग गरेको छ ।अहिले बृद्ध राईको अवस्था स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको खा’र्तम्छा स्वास्थ्य चौ’कीले जनाएको छ । ७७ बर्षिय वृद्ध राईलाई खा’र्तम्छा स्वास्थ्य चौ’कीको नि’गरानीमा छिमेकी क’टेरोमा सा’रेर उपचार गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मध्यराति पोखराबाट आयो दुःखद खबर: फेरि शक्तिशाली बम बिस्फोट